SIYAASIYIINTEY JIDKII TANASUL EE AUN XASAN BIN CALI ABUU DAALIB BAA LOO BAAHAN YAHAN MAANTA | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii SIYAASIYIINTEY JIDKII TANASUL EE AUN XASAN BIN CALI ABUU DAALIB BAA LOO...
SIYAASIYIINTEY JIDKII TANASUL EE AUN XASAN BIN CALI ABUU DAALIB BAA LOO BAAHAN YAHAN MAANTA
Madaxdeeniyey i jiid aan ku jiideda naga daaya. Mid culeys keena iyo mid gadaal uga dhega xaajada. Umaddaan daashan xal uma aha.
Dhinacyada is diidanow dadkan daashan ha loo turo. Taariikhdu wey xusi doontaa. Yaa jidkii AUN Asxaabigi Xasan Bin Cali maata qaata uu ku badbaadiyey Muslimiinta. Xiligi dagaalkii Ratiga ee Muslimiinta ee ay kala Hogaaminayeen AUN Asxaabigi Mucaawiye Iyo Asxaabigi AUN Xasan bin Cali. Oo uu Xasan u Tanaasulay Mucaawiye. Muslimiinta dhiigooda ayaa ku kala badbaaday. Waxay heleen Midnimo iyo quwad ay ku furteen dhulal fara badan.
Maanta waxaan u baahanahay geesi u damqada dadkiisa daruufahu la degeen oo tanaasul Qaadan kara. Waan hubaa in dhib uu leeyahay. Balse wax walba oo guul ah dad baa qaraar u qaatay u soo samray. Waxay leeyihiina uga tegay.
War hooy Siyaasiyiinteeniyay gaalo shisheeye dan inooma aha iyo xukun jaceyl. Aan taariikhdeeni awoiwataashen dib ugu noqono oo gari geed ma dhaafto bey dhihi jireen. Caqligu ha shaqeeyo. Walal ama walaalo iska celinta ha la joojiyo. Danta Soomaali wax walba ha loo liqo.
Previous articleMadaxweyne Dani oo la kulmay Safiirka Dalka Sweden
Next articleBeesha Caalama oo digniin u jeedisay ra iisal wasare Rooble
Ku simaha Duqa magaalada Ahne Gudoomye ku Xigeenka 1aad ee Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabduqaadir Maxamed Maxmauud Caana boore ayaa Xalay kormeer ku kala...
Qarax uu ku dhintay Gudoomiyihii deegaanka Garasbaaley oo ka dhacay...
Kulan Deg Deg ah oo u bilawday Ra’iisul Wasaare...
Diyaargarow xoogan oo ku aadan doorashada dalka Jabuuti oo...
Kumannaan carruur reer Sirilanka ah oo dadka korsada la siiyey qaarkood...
Madaxweynaha aan la Caleemo saarin wali Guudlaawe oo la kulmay xildhibaannada...